अश्लील फिल्म बनाएको आरोपमा शिल्पाका पति पक्राउ परेपछि कंगनाले दिइन् यस्तो प्रतिक्रिया Canada Nepal
अश्लील फिल्म बनाएको आरोपमा शिल्पाका पति पक्राउ परेपछि कंगनाले दिइन् यस्तो प्रतिक्रिया
काठमाडौं - बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्रा अश्लील फिल्म बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । शिल्पाका पति अश्लील फिल्म बनाएको आरोपमा पक्राउ परेपछि बलिउडका कलाकारले विभिन्न प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
यस्तै आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आइरहने अभिनेत्री कंगना रनौटले पनि यसबारे बोलेकी छिन् । कुन्द्रा पक्राउ परेको विषयमा उनले यस्तो घटना भारतमा मात्र नभएर विभिन्न ठाउँमा भएको बताएकी छिन् ।
उनले भनेकी छिन् - ' सबै चम्किएका कुराहरु सुन हुँदैनन्, म अरु थप कुराहरु पनि उदांगो पार्नेछु ।'
सोमबार पक्राउ परेका कुन्द्रालाई मुम्बईको एक अदालतले २३ जुलाईसम्म प्रहरी हिरासतमा पठाउन आदेश दिएको छ । राज पक्राउ परेपछि अभिनेत्री शिल्पाले डान्स रियालिटी शो ‘सुपर डान्सर च्याप्टर ४’ छाडेकी छिन् ।
श्रावण ६, २०७८ बुधवार १३:३५:३८ बजे : प्रकाशित
विक्की र कटरिनाको विवाहमा मोबाइल लान नपाइने, यस्तो नियम राखियो
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री कटरिना कैफ र अभिनेता विक्की कौशलको विवाहको चर्चा पछिल्लो समय निकै छ । एकअर्काको प्रेमसम्बन्ध रहेका कटरिना र विक्कीले आउँदो डिसेम्बरको पहिलो हप्तामा विवाह गर्दैछन् ।
उनीहरुले डिसेम्बर पहिलो साता नै जयपुरको एक रिसोर्टमा गर्ने पक्का भइसकेको छ । उनीहरुले विवाहमा सहभागी हुनेलाई कडा नियम बनाएका छन् ।
उनीहरुको विवाहमा सहभागी हुनेले मोबाइल लैजान नपाउने भएका छन् । विवाहलाई गोप्य राख्नको लागि उनीहरुले मोबाइल लान नपाइने नियम बनाएका हुन् ।
विवाहको लागि उनीहरुले राजस्थानको जयपुरस्थित सवाई माधोपुरको सिक्स सेन्स लग्जरी होटल बुकिङ पनि गरिसकेका छन् । यसैबीच उनीहरुको विवाहमा कुन कुन कलाकारको सहभागी रहन्छ भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । उनीहरुले आफ्नो विवाहमा आउने पाहुनाको सूची पनि तयार गरेका छन् ।
मंसिर ११, २०७८ शनिवार २०:२०:५५ बजे : प्रकाशित
सलमानको फिल्म 'अन्तिम'ले एकैदिन कमायो साढे ७ करोड, हालसम्मको कमाई कति ?
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण बन्द रहेका भारतका फिल्महल विस्तारै खुल्न थालेका छन् । कोरोना संक्रमण कम हुन थालेपछि फिल्महरु सिनेमा घरमा रिलिज भएका छन् ।
यस्तै पछिल्लो समय सलमान खान अभिनित फिल्म 'अन्तिम' को निकै चर्चा छ । महेश मान्जरेकरको निर्देशनमा बनेको फिल्म 'अन्तिम'ले पहिलो दिनमा नै राम्रो कमाइ गरेको छ । फिल्मले पहिलो दिन शुक्रबार साढे ४ करोड कमाई गरेको छ ।
यस्तै दोस्रो दिन फिल्मले साढे ५ करोड कमाई गरेको छ । यस्तै आइतबार फिलमले साढे ७ करोड कमाई गरेको छ । प्रदर्शनमा आएको तीन दिनमा यस फिल्मले १८ करोड कमाई गरिसकेको भारतिय मिडियामा जनाइएको छ ।
फिल्ममा सलमानसँगै आयुष शर्मा, महिमा मकवानाको मूख्य अभिनय रहेको छ । फिल्ममा सलमान र उनका ज्वाँइ आयुष शर्माबीच भिडन्त देख्न पाइनेछ ।
मंसिर १३, २०७८ सोमवार १२:३४:३१ बजे : प्रकाशित
सलमानको फिल्म 'अन्तिम'ले राम्रो कमाई गर्न सकेन, हालसम्मको कमाई कति ?
यस्तै पछिल्लो समय सलमान खान अभिनित फिल्म 'अन्तिम' को निकै चर्चा छ । महेश मान्जरेकरको निर्देशनमा बनेको फिल्म 'अन्तिम'ले पहिलो दिनमा नै राम्रो कमाइ गरे पनि त्यसपछि खासै राम्रो कमाई गर्न सकेन । फिल्मले पहिलो दिन शुक्रबार ५ करोड कमाई गरेको छ ।
यस्तै दोस्रो दिन फिल्मले ६ करोड कमाई गरेको छ । यस्तै आइतबार फिल्मले साढे ७ करोड, सोमबार ३ करोड २४ लाख, मंगलबार २ करोड ९० लाख र बुधबार साढे २ करोड कमाई गरेको छ । यस फिल्मले हालसम्म २७ करोड २८ लाख कमाई गरिसकेको भारतिय मिडियामा जनाइएको छ ।
मंसिर १६, २०७८ बिहिवार १४:३८:१२ बजे : प्रकाशित
२० वर्षपछि सनी देओलको फिल्म'गदर'को सिक्वेल बन्दै, अमिषाले शेय गरिन् यस्तो तस्बिर
काठमाडौं - सनी देओलको सफल फिल्म 'गदर' को सिक्वेलको पछिल्लो समय निकै चर्चा छ । यसै फिल्ममार्फत सनीले अवार्ड मात्र जितेनन्, उनले हिन्दी फिल्मले गर्न सक्ने व्यापारको आंकडा पनि तय गरेको थियो ।
१५ जुन २००१ मा रिलिज भएको यस फिल्मको सिक्वेल अहिले निर्माण भइरहेको छ । यस फिल्म निर्माण भएको बारे अभिनेत्री अमिषा पटेलले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर शेयर गर्दै जानकारी गराएकी छन् ।
उनी पनि लामोसमयपछि फिल्ममा देखिदैछिन् । यो फिल्म पनि प्रेम कथामा आधारित नै रहनेछ । फिल्ममा निर्देशक अनिल शर्माका छोरा उत्कर्ष शर्मा पनि थपिएका छन् ।
अनिल शर्माको निर्देशनमा तयार भएको फिल्म गदर मा भारतीय युवा र पाकिस्तानी युवतीको प्रेम कथा देखिएको थियो । फिल्म प्रदर्शन भएको २० वर्षपछि यसको सिक्वेल बन्ने भएको हो ।
मंसिर १६, २०७८ बिहिवार १९:५९:५३ बजे : प्रकाशित
अक्षयकुमारको फिल्म 'सूर्यवंशी' को कमाई करिब २ सय करोड, कति कमायो ?
यस्तै पछिल्लो समय अक्षयकुमार अभिनित फिल्म 'सूर्यवंशी' को निकै चर्चा छ। रोहित सेट्टीको निर्देशनमा बनेको फिल्म 'सूर्यवंशी' ले शुरुवातदेखि नै राम्रो कमाई गर्दै आएको थियो । प्रदर्शन भएको ४ हप्ता पुग्न लाग्दा यस फिल्मको कमाई करिब २ सय करोड पुग्न लागेको छ ।
फिल्मले गत हप्ताको शुक्रबार ७१ लाख शनिवार एक करोड ४३ लाख, आइतबार २ करोड ५ लाख, सोमबार ६२ लाख, मंगलबार ६४ लाख र बुधबार ५१ लाख कमाई गरेको छ ।
हालसम्म यस फिल्मले एक सय ९० करोड ८८ लाख कमाई गरिसकेको छ । यस कमाई भारतको मात्र हो । फिल्ममा अक्षयसँगै कट्रिना कैफ, अजय देवगन, रणवीर सिंहको मूख्य अभिनय रहेको छ ।
मंसिर १६, २०७८ बिहिवार २०:२१:५४ बजे : प्रकाशित